Forex Trading Benefits | EECN Forex Trading Kubatsirwa neFXCC
musha / About / Nei FXCC
Nei FXCC? Ndicho chikonzero ..
Pane zvakawanda zvevatengesi mubazi redu vanoda bhizinesi renyu. Saka chii chinoparadzanisa FXCC kubva kune vamwe vose, nei tichizviona isu tiri vakanakisisa? Sei uchifanira kutengeserana nesu, pane kune mumwe mutengesi? Chii chinoita kuti isu tive vakakosha?
Iwe haufaniri kunge uri mumbure wakakwirira unofanirwa nevamwe kuti uwane mutsauko weFXCC, tine mutsara paFXCC; "miti mioki mikuru inokura kubva kumadiki maduku". Tinoshandisa iyo nokuti takaona vashambadzi vakawanda, avo vakatengesa nesu kubvira patakatanga, vanokura nesu kuti vave vatengesi vakakurumbira.
Saka tichafara kukubatsira nemafungiro ako, chero chikamu chekukura kwauri kuitika iye zvino. Yatsva kuenda kunotengesa? Kugamuchira, ngatitangei kutanga. Une unyanzvi hunobatsira? Tinofunga kuti tine chimwe chinhu kwauri, chikonzero chaicho chekusiyana kuratidza kwauri.
Isuwo tinomira seri kwechirevo chedu che "broker kurutivi rwako". Asi isu tiri "parutivi rwako" sei? Zvakanaka pakutanga, tinoda iwe kuti ubudirire, tinoda iwe kuti ubudirire uye kuvandudza nekuvandudza unyanzvi hwako semutengesi. Zvinonzwisisika kana iwe uchifunga nezvazvo. Kubudirira, ruzivo, nyanzvi vatengesi vatengesi vanofara. Kana iwe ukabudirira ipapo ucharamba uchitengeserana nesu uye unofarira zvese zvatinoda kupa.
Takatanga kutanga kutengesa sezviri nyore, yakananga forex broker uye sezvatakawana zvizhinji zvekukura kwedu, takawedzera pakuva nani. Sezvo teknolojia mubazi redu yakafambira mberi mberi nokukurumidza, takagamuchira uye takanga tiri pamwoyo wezvinhu zvose zvesayenzi, kuti tive nechokwadi kuti takaramba takanyatsogadzirisa pamakambani edu. Isu tave nekugadzira mukurumbira wakaisvonaka, uchiri kuve nechinangwa chepakutanga chekuita kuti nzira dzekutengesa dzive nyore, apo tichiisa mutengi kutarisira mberi kwebhizimisi redu. Tinobata mumwe nemumwe wevashandi vedu nekuremekedza kukuru nekufungisisa.
Tinogona kukubatsira kuti kubudirire kuburikidza nekupa kushambadzira zvakajeka zvakakwana uye kushandiswa pasina nzvimbo yekutengeserana; mirairo yenyu inonanga zvakananga kumusika uye inofananidzwa, hapana kushandiswa kwemaskiti. Kushandisa muenzaniso wedu weC ECN / STP kunovimbisa kuti uri kupinda mumusika nokukurumidza sezvo teknolojia yezvino inogona kubvumira. Iwe uchawana zvinyorwa zvakanakisisa uye zvinozadza pamusika unogona kuunza, nenzira yakarurama uye yakajeka sezvinobvira.
Isu tinokubatsirawo kukudziridza sevatengesi kuburikidza nekupa ruzivo rwekutanga rwekutsvakurudza. Haisi iyo inowanzovharwa pasi zvinyorwa uye nhamba dzakawanda dzinokanganisika, dzinowanzotorwa semafungiro, izvo zvauchaona zvichiendeswa nevamwe vatengesi. Asi zvakanyatsofungidzirwa, zvakakosha uye zvakajeka mashoko, kubatsira kubatsira rubatsiro rwako rwekuita.
Isu tiri kuuraya basa chete. ECN Forex Vatengesi vanobhadharwa nemari shoma pamutambo. Iyo yakakwirira yekutengesa mabhizimisi vatengi vevashambadziri vanoita, iyo yakakwirira iyo mutengesi wemari. Kuwana urongwa wako kutengesa uye urongwa hwakazadzwa nekukurumidza sezvinobvira, chinangwa chedu chakarurama uye basa.
Saka pane iwe unazvo; iyo pamusoro pedu sumo iyo yakafanana: yakajeka, yakajeka uye yakajeka semushandi wega wega watinopa vatengi vedu. Iwe unogona kunge wakaedza zvimwe zvekuzorora, sei usina kutitendera isu mukana wokuratidza kuti sei tichifunga kuti isu tiri vakanakisisa?